By vijayafm on	 April 13, 2019 नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, विजय परिवार, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय, स्थानीय तह
विकासका लागि सञ्चारको महत्व हुन्छ । सामुदायिक रेडियोहरुले ग्रामीण सञ्चारका माध्यमबाट स्थानीय विकासमा मद्दत पु¥याउने गरेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले यसको विश्लेषणमा खासै ध्यान नदिएपनि तथ्यगत पाटाहरुको विश्लेषण गर्नु भुल्नुहुँदैन ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ सामुदायिक रेडियोले के गर्न सक्छन् ? साना साना क्षेत्रमा रहेका रेडियोले विकासका लागि के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? सामुदायिक रेडियोहरुले विकास पत्रकारिताका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई मिहिन तवरले केलाउनु जरुरी छ ।
सामुदायिक रेडियो विजय एफएमको यस वर्षले समृद्धिका लागि, विकासका लागि, विकल्पका लागि, लक्षित क्षेत्रको विकासको सञ्चार अभियान र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सहायक सिद्ध हुने विभिन्न कार्यक्रम प्रसारण तथा विषयवस्तुको उठान गरेको छ । सफलता र असफलताको मूल्यांकन फरक होला तर विकासका लागि सञ्चारको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा सतहमा देखाएको छ ।
सामुदायिक रेडियोहरुको सफलता अर्थसंग जोडिदैन । यसको सफलता सामुदायिक रेडियोहरु, सामुदायिक पत्रिकाहरुले उठाएका विषयवस्तु र त्यसले समाजमा ल्याएको प्रभावसंग जोडीएको हुन्छ । सामुदायिक रेडियोको सफलता स्रोताको जीवनमा आउन सक्ने सकरात्मक परिवर्तनसंग जोडिएको हुन्छ ।
विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा संञ्चालित विजय एफएम र विजय खबर पत्रिकामा यस वर्ष स्रोता तथा पाठकको दैनिक जीवनसंग जोडिएका विभिन्न पाटाहरुका विषयवस्तु उठान भएका छन् । सञ्चार एक प्रकारको एजेण्डा पनि हो । संस्थागत रुपमा १९ वर्षदेखि क्रियाशील यस संस्थाले वार्षिक एजेण्डा अनुरुप नै आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शेयरकाष्ट इनिसियटिभ नेपालसंगको सहकार्य र अध्ययनपश्चात यस वर्ष हामीले स्रोता तथा पाठकका मूलभूत चासो र सरोकारका मुद्धाहरुको छनोट गरी कार्यक्रम अघि बढाएका थियौँ ।
विकास र सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तिय सचेतना, कला र वातावरण संरक्षण सबैभन्दा बढी स्रोता आफन्तको चासोको विषय हो भन्ने अध्ययनको निचोड पश्चात हामी पनि यिनै विषयमा बढी केन्द्रीत बन्यौँ । कार्यक्रम संख्यात्मक रुपमा भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा दक्ष हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोड थियो । यतिमात्र होइन स्रोता आफन्तको नजिकको समय किटान गरी हाम्रा कार्यक्रमहरुको प्रसारण समय तालिका तय गर्यौँ । जुन हाम्रा लागि र स्रोताका लागि उपयुक्त निर्णय बनेको छ ।
समृद्धि खोजिएको वार्षिकोत्सव
भदौ ५ गते मध्य नेपालकै संचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दिन हो । विकासका लागि सञ्चार आवश्यक छ भनी गैँडाकोटका युवाहरुको प्रभावकारी निर्णय भएको दिन, विजय एफएम स्थापना भएको दिन । गरिबी, अशिक्षा, कुरीती, विसंगती, असमानता जस्ता विकृत पक्षहरुमाथि विजय हासिलका लागि विजय एफएमको स्थापना भएको थियो । यसैमान्यतालाई आधार बनाएर यसवर्षको वार्षिकोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा हामीले वडावडामा समृद्धिका लागि संभावना खोज्यौँ ।
गैँडाकोट १ देखि गैँडाकोट १८ सम्म विकासको विकल्प खोज्दै थियौँ । हामीले तितो यर्थार्थ भेट्यौँ । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको एउटै स्वर थियो, गैँडाकोटको विकासका लागि कृषि र पर्यटनको विकास आवश्यक छ । यति जनप्रतिनिधिले भनिरहँदा ९८ प्रतिशत वडाको बजेट सडक निर्माणमा पोखिएको थियो । सडक अर्को वर्ष नहुँदै भत्किने निश्चित छ । संभावना देखेको क्षेत्रमा लगानी लाजमर्दो अवस्था थियो । सडकको लगानी घटाएर उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने बढाउने जनप्रतिनिधिको सुखद् आश्वासन मिल्यो ।
समृद्धि खोजिएको यस वर्ष रेडियोको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नमुना ग्राम सञ्चार अभियानको सुरुवात भयो । गैँडाकोट नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र मध्येको गैँडाकोट ३ का विविध समस्या सञ्चार अभियानले उठाउने निर्णय गर्यौँ । वार्षिकोत्सवका दिन यस संस्थाका अध्यक्ष गोपीनाथ खरेल र गैँडाकोट ३ का वडा अध्यक्ष शिवकान्त तिवारीद्धारा संयुक्तरुपमा सहकार्यपत्रमा हस्ताक्षर गरी सञ्चारको नयाँ आयाम सुरु भयो ।
भौगोलिक र सेवा सुविधाका कारण पछाडी परेको समुदायलाई सञ्चारको पहुँचमा ल्याउन, आवाज विहिनको आवाज बन्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ नमुना ग्राम सञ्चार अभियान अघि बढेको थियो । बर्षभरी साप्ताहिक रुपमा गैँडाकोट ३ का आवाजहरु प्रसारण तथा प्रकाशन भएका छन् ।
यस कार्यक्रमले वाड नं. ३ मा विद्युतिकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य, यातायात, जुडीबुटीको बजारीकरण, शौचालय जस्ता आधारभूत मानविय आवश्यकताका पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । यस कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ अन्य संघसंस्थाका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरुमा बृद्धि भएको छ । गैँडाकोट ३ को भूजेल गाउँमा “चालिस घर चार शौचालय” समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण पश्चात केही संघसंस्था नमुना बस्ती कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारीमा रहेका समेत छन् भन्ने बुझिएको छ ।
यसैगरी समुदायमा वित्तिय सचेतनाका लागि देशकै उत्कृष्ट सहकारी विकूले पनि सेवाकेन्द्र विस्तार गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको छ । यो समुदायको लागि बरदान हुन सक्छ । यसैगरी सबैभन्दा विकट क्षेत्र मार्केमा पहिलो पटक यही कार्यक्रमले जनप्रतिनिधि पुगेका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा बाटो पुग्ने जनप्रतिनिधिले बाचा समेत गरेका छन् ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सञ्चार
समाजमा गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, लैगिंक समानता, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग नीवन सोच र पूर्वाधार जस्ता मूलभूत दीगो विकासका लागि एजेण्डा माथि सामुदायिक रेडियो विजय एफएम र विजय खबर पत्रिकाले आफ्ना विषयवस्तु केन्द्रीत गरेका छन् । यसले आगमी वर्ष पनि निरन्तरता प्राप्त गर्नेछन् । समाजमा ब्याप्त असमानता माथि विजयका लागि यस संस्थाको स्थापना भएको थियो ।
नवलपुर चितवन लगायतका मध्ये नेपालका क्षेत्र कृषि उब्जनीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यहाँ आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विकास गर्न सके विकासका लागि साथै भोकमरी अन्त्यका लागि समेत सहायक सिद्ध हुन सक्छ । यस हेतुले पनि विजय एफएमले आफ्ना विषयवस्तुमा यस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको छ । यस संस्थाले स्थापना काल देखि नै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकोछ ।
यसैगरी यस वर्ष लैँगीक समानताका लागि “सहि हो” अभियान प्रसारणमा रह्यो । महिलाहरु जुन सुकै पेशा र व्यवसाय गर्न सक्षम छन् भन्ने चेतनामूलक सन्देश यस अभियानले छोडेको छ । यसैगरी साप्ताहिक रुपमा सचेतना कार्यक्रम नियमित प्रसारणमा समेत रहेको छ । बालिका दिवशका दिन हरेक वर्ष बालिकाहरुलाई सञ्चारको पहुँचमा ल्याउने काम समेत गरिरहेका छौँ ।
पशुपालन कृषि, साना घरेलु व्यवसाय र नेपालमानै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान समाजमा बाड्न आवश्यक थियो । स्थानीय स्तरको उत्पादन र उपभोग संस्कृतिलाई जोड दिनुपर्दछ भनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सकरात्मक सोचको प्रवर्धन गरिरहेका छाँे । समुदायको आर्थिक वृद्धिमा परिवर्तन ल्याउन आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता बढाउन जरुरी छ । उद्यमशीलतका लागि सञ्चार अभियानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि पनि विजय एफए सचेत रहेको छ ।
समुदायको विकासका लागि विजय एफएम र विजय खबरले विभिन्न रेडियो कार्यक्रम तथा विषयवस्तु उठान गरिरहेका छन् । विकास र सुशासनका लागि हाम्रो नगर, विजय खबर, दृष्टिकोण, देशपरदेश, आजको सवाल जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी यही आ.व. को असार मासन्तसम्म विभिन्न संस्था अन्तक्रिया गरी थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आधार खडा गर्ने छ ।
समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद ठूलो समूह अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यसबाट मध्ये नेपालका जिल्लाहरुपनि अछुतो छैनन । यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारी पक्ष र सरोकार र सहकारी पक्ष क्रियाशील छन् ।
विजय एफएम र विजय खबर पत्रिका सहकारीबाट सञ्चालनमा रहेका कारण पनि सहकारीको मर्म अनुरुप नै विषयवस्तु उठाइरहेका छन् । सहकारी ग्रामको रुपमा रहेको यस क्षेत्रलाई सहकारी अवधारणा अनुरुप विकास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको पनि छ । वित्तिय पहुँच आम जनमानसमा पु¥याई गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । यही मर्मलाई पनि विजय एफएमले आत्मसाथ गरेको छ । सहकारीका विविध गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिबी निवारणका लागि सञ्चार अभियान आवश्यक रहेको छ । हामी यही बाटोमा अघि बढीरहेका छाँै ।
आरोग्यता तथा कल्याण ( स्वास्थ्य )
समुदायका व्यक्ति खुसी एवं स्वस्थ भए मात्रै दीगो विकास प्राप्ती सहज छ भन्ने कुरामा संस्था अवगत नै रहेको छ । समुदायको सकरात्मक परिवर्तनका लागि यसले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । समाजमा असल संस्कारले मात्र आरोग्यता, कल्याणकारी कर्म र समृद्धि सम्भव छ । तसर्थ विजय एफएम र विजय खबर पत्रिकाले स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई संस्थाको प्रमुख कार्य मानिएको छ । हरेक शनिबार बेलुका ८ बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम र स्वास्थ् यखबर बुलेटीन, पत्रिकामा प्रकाशनमा रहने स्वास्थ्य सन्देश उदाहरण हुन् । सुनौलो भविष्यका लागि भन्छिन् आमा जस्ता कार्यक्रमले राम्रो प्रभाव समुदायमा छोडेका छन् ।
यति मात्र होइन, समुदायमा कुनै समस्या परेको खण्डमा विजय हेल्प लाइनबाट सहयोग समेत गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि गैँडाकोट ३ का २ वर्षिय सिम्रन पौडेल बालिकाको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग प्रदान गरेको थियो । तातो तेलमा परेर घाइते बालिकाको उपचारका लागि संस्था र अन्यसंस्थासंगको सहकार्यमा करिब १ लाख सहयोग प्रदान गरिएको थियो । यसरी नै बरिष्ठ साहित्यकार गोविन्दराज विनोदीको स्वास्थ्य उपचारमा संस्थाले सहयोग पुर्याएको छ । यसका साथै समाजमा रहेका अशक्त र आर्थिक समस्यामा परी स्वास्थ्य उपचार गराउन नसक्ने समुदायका लागि रेडियोले सञ्चार अभियान मार्फत सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
यस मिडियाले शैक्षिक क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि विकासका लागि संस्थागत सहकार्य र आफ्नै योजनाअनूरुप काम गरेको छ । शिक्षा र शिक्षण संस्थाको उन्नयनका लागि साप्ताहिक रुपमा हाम्रो बालबालिका हाम्रो भविष्य, उज्यालो संसार र पाठशाला जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
शिक्षण कार्यलाई प्राइमटाइममा प्रसारणको व्यवस्थापन गरेका छाँै । यस वर्ष विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दीको समस्या, सामुदायिक विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवनको अभाव, शिक्षण पद्धतिको सन्दर्भमा विभिन्न विषयवस्तु विजय खबर पत्रिकाले उठान गरेको छ ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सफा पानी तथा सरसफाइ, जलबायु सम्बन्धी कारवाही, जलमुनिको जीवन, जमिनमाथिको जीवन, यी सबै पक्षको एकाकार स्वरुप वातावरणीय संरक्षणका लागि विजय एफएम र विजय खबरले विषयवस्तु उठान गरिरहेका छन् । सुरक्षित पानी स्वस्थ जीन्दगानी, हाम्रो वन, हेल्लो टाइगर, कृषि गतिविधि, जस्ता कार्यक्रम मार्फत दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि अघि सारिएका विषयमा हामीले पनि सञ्चारको माध्यमबाट सहायक सिद्ध काम गरिरहेका छौँ ।
विजय एफएम १०१.६ को प्रवर्धक संस्था विकू सहकारी र विजय विकास स्रोत केन्द्र हुन् । प्रवर्धक संस्थाले समुदायमा सहकारी अवधारणा र वित्तिय सचेतनाका क्षेत्रमा विविध काम गरिरहेका छन् । विजय एफएमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको नै समुदायमा वित्तिय सचेतनाको विगुल फुक्नु हो ।
वित्तिय पहुँचमा आम सर्वसाधरणलाई लैजानु र आर्थिक समृद्धिको पाटोमा समुदायलाई अघि बढाउनु प्रमुख लक्ष्य समेत हो । विगत देखि आगत सम्म सहकारी र वित्तिय सचेतनाका सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । विकूको अर्थजगत, सहकारी सन्दर्भ, सहकारी चर्चा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम र स्थानीय खबरमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी खबर सहकारी गतिविधिलाई नै प्रवर्धन गरिएको हुन्छ ।
दीगो सहर र समुदायहरु
व्यवस्थित सहर, व्यवस्थीत गाउँ, दीगो सहर निर्माणका लागि सचेत र सचेतनामूलक काम रेडियो तथा पत्रिकाले निरन्तर गरिरहेको छ । यसैगरी सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भवन निर्माण आचारसंहिता पालनाका लागि सचेतना समेत फैलाउँदै आएको छ । दरो घर दीगो वस्ती कार्यक्रम मार्फत सुरक्षित भवन निर्माणका लागि जनचेतना फैलाउँदै आएको छ । जुन कार्यक्रम एनसेटको सहकार्यमा गर्दै आइरहेका छाँै ।
दीगो विकासका लागि समाजमा शान्ति र न्यायकाको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । सकरात्मक सञ्चारका कारण समाजमा शान्ति र सार्वजनिक न्याय प्राप्तीका लागि सचेतना र खबरदारी प्रति संस्था सदैव संवेदनशील रहेको छ ।
सञ्चारलाई राष्ट्र निर्माणमा सकरात्मक प्रयोग गरिनुपर्दछ र खास राष्ट्रिय समाजको स्वायत्तता तथा सांस्कृतिक पहिचान कायम गर्न पनि सञ्चारको अनुकुल प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसमा मिडियाको प्रयोगमा स्थानीय सरकारको खासै चासो देखिदैन । तर पनि हामी सञ्चारविद् म्याक्वेलको विकास सञ्चार सिद्धान्तअनुरुपनै हाम्रा कामलाई अघि बढाएका छौँ । यस सञ्चारको मानक तत्व भनेको नै तल्लो तहको सहभागिता हो । हामीले हरेक कार्यक्रममा स्थानीयको सञ्चार पहुँचलाई विशेष जोडका साथ हरेका छौँ । सञ्चारविद् माइकल कुञ्जिकका केही भनाइहरुजस्तै विजय एफएम र विजय खबरले पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । हामीले सकरात्मक विकासका कामहरुको कार्यान्वयनमा सघाएका छाँै । स्थानीय संस्कृति र भाषालाई प्रमुखताका साथ हरेका छौँ । भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षलाई समाजको हेतु अनुरुप हेर्दछौँ । सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्ती गर्न आम तथा अन्र्तर्वैयक्तिक सञ्चार स्रोत र प्रणालीको योजनावद्ध तथा क्रमबद्ध प्रयोग विकास सञ्चार हो भन्ने मान्यताका साथ यस वर्ष विजय एफएमले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाएको थियो ।
यसका साथै कला संस्कृतिको उत्थान, भाषा संस्कृतिको उत्थान, चाडपर्वको प्रवर्धन तथा समसामयिकि विभिन्न जनचासोको विषयमा यस वर्ष विभिन्न रेडियो कार्यक्रम केन्द्रीत रह्यो । असाढ १५ गते खेतखेतमा विजय, तीज विशेष कार्यक्रम, दशैँ तथा तिहार विशेष रेडियो कार्यक्रम, भानु तिम्रो सम्झनामा साहित्यिक कार्यक्रम, होली विशेष जस्ता विभिन्न चाडपर्व विशेष कार्यक्रमहरुको निरन्तरता यस वर्ष पनि रह्यो । यसले समाजमा आत्मियताको आभाष बढाउने कुरामा हामी ढुक्क अनि आत्मविश्वासी रहेका छाँै ।